सपनाले पनि मुख खोलिन : बिनय र सपनाको सम्बन्धको बारेमा सबै कुरा प्रदाफास गरिन (भिडियो) – Online Nepalaja
February 13, 2021 50
काठमाण्डौ । ‘म मौन बसेको छु यस्को अर्थ यो होइन कि म गलत छु । मैले मुख खोल्दा सत्य बाहीर आउने र नखोल्दा नआउने यो पक्कै होइन । सत्य त एकदिन बाहीर आउँछ आउँछ । त्यसकालागी मैले मुख नै खोख्नु पर्छ भन्ने छैन । मैले मुख खोलर कसैलाई नराम्रो हुन्छ भने म मेरो मुख खोल्नै चाहान्न ।’ यो भनाई हो तीन करोड नेपाली जनाताको ढुकढुकी सपना रोका मगरको ।
सपना र उनको बाबु भनिएका विनयजंगबीचको सम्बधमा तिक्तता आएपछि सपना लामो समयसम्म मौन नै बसिन् । यो विषयमा सबैले बिना गल्ती सपना मौन बसेको होइन भनेर पनि टिप्पहरु धेरैले गरे । सपना मौन बसिरहंदा विनयजंगका पक्षमा बोल्नेहरुले सपनाको मौनतालाई नै कम्जोरी बनाउँदै विभिन्न मिडियाहरुमा विभिन्न थरीका कुराहरु पनि गरे । यस प्रकारको भनाईहरुप्रति सपनाको धारणा वा जवाफ के रहन्छ र त्यो कहिले आउँछ भन्ने पर्खाई सबैकोलागी थियो ।
यसैबीच केही दिन अघि मात्रै सपनाका आमाबुवाले विनयजंगले सपनामाथि गरेको हरेक कर्तुतहरुको पर्दाफास गरिदिए । उनीहरुको उक्त भनाईप्रीत सोशल मिडियामा भुईँचालो नै आयो । त्सपछि विनयजंग र उनका पक्षधरहरुको खेल उनीहरुमाथि नै भारी पर्न गयो । सबैले विनयजंगलाई कार्वाहीको माग गरिरहे । उनकै संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ताको रुपमा चिनिएकी शर्र्मिला वाईवाले त कसैले विनयजंगमाथि मुद्या नहालेपनि आफुले हाल्ने र कार्वाहीको दायरमा ल्याएरै छाड्ने सम्मको प्रतिज्ञा गरेकी छन् ।
आफु विरुद्ध चारैतिरबाट सबै खनिन थालेपछि विनयजंगले फेरी अर्को एउटा षडयन्त्र रचे जुन थियो पैसा चोरीको आरोप । उनको भनाई अनुसार सपनाले आफुसंग सम्बन्ध तोड्नको कारण उनका बुवाआमाले आफुलाई लगाएको आरोप गलत हो र वास्तवमा सपनाले संस्थाको नाममा आएको ५० हजार रकम चोरी गरेको बताए । जब विनयजंग सपनालाई चोर भने तब बल्ल सपनाले आफ्नो मुख खोलेकी छन् । जस्का पर्खाई अहिलेसम्म उनका फ्यानहरुले गर्नुकासाथै सबै नेपालीहरुले गरिरहेका थिए ।
सपनाले भनेकी छन्,‘मलाई माफ गर्नुस् मेरो मौनताले यदि कसैलाई चोट लाग्दैन र आत्मासम्मानमा ठेस पुग्दैन भने म मौन नै बस्न रुचाउँछु । तर यसको अर्थ यो होइन कि म गलत छु । म गलत छु छैन यो त समयले भन्ने कुरा हो । किनभने समयभन्दा बलवान यो संसारमा अरु केही छैन । जस्ले एकदिन अवश्य पनि सत्यको जीत गराएरै छाड्छ ।’ सपनाले आफुलाई धरातल बिर्सियो भन्नेहरुलाई पनि चोटिलो जवाफ दिएकी छन् । बाँकी भिडियोमा
Prevकन्चनको अ’बस्थालाई लिएर नि’राश हुदै बोले डाक्टर प्रदिप, नि’कै दु’ख लागेको छ ! (हेर्नुस् भिडियो)
Nextयसरी लिन सकिन्छ शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा १८ महिना सम्म किस्ता तिर्न सकिने सबैभन्दा सस्तो पल्सर
विवाह भएको ३३ वर्षसम्मपनि बच्चा भएन,डाक्टरकोमा गएर चेकगरेपछि कारण थाहा पाउँदा उड्यो सबैको होस
“अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,ला,मी जान सकूँ ? महान चेली समिक्षाको रो,द,न (भिडियो सहित)
श्रीमानको ज्या’न लिएपछि श्रीमतीलाई…..
आफ्नो मृ,तक दाईको न्या’यको लागि एक्लै प्रहरी प्रसाशनसंग ल’ड्ने यी चेलीको शाहस प्रति सलाम
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3188)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2861)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1475)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1061)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (613)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (463)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (426)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (395)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (378)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (347)